नेपाली सेनाको अर्को भ्रस्टचार काण्ड बाहिरियो, थाहा पाउने सबै चकित — Imandarmedia.com
नेपाली सेनाको अर्को भ्रस्टचार काण्ड बाहिरियो, थाहा पाउने सबै चकित
काठमाडौँ। अमेरिकामा पौने २८ करोडमा घोटाला, नेपाली सेनाको संलग्नता, एनसेलको मुद्दामा सेना किन मुछियो ? नेपालमा निकै चर्चित भएको एनसेलको ६१ अर्व राजश्वसम्बन्धी प्रकरणमा अमेरिकामासमेत अनियमितता फेला परेको छ।
गैरसैनिक आर्थिक निर्णयमा सैनिक जर्नेलको सहभागिता कति उचित हुन्छ? भन्ने डिसी नेपालको प्रश्नमा नेपाली सेनाले कहिले काँही केही सामान खरिद गर्दा गठन हुने बोर्डमा बाहेक सैन्य सहचारीले नै फाइल रायसहित टिप्पणी उठाउने प्रचलन नरहेको जनाएको छ। स्रोतले डिसी नेपालसँग भन्यो,